एनआरएन थाईल्याण्डले दियो राजाको अन्तिम श्रद्धाञ्जली ! एनआरएन थाईल्याण्डले दियो राजाको अन्तिम श्रद्धाञ्जली !
अनलाइनपाना संवाददाता २०७४ कात्तिक ३० गते बिहीवार बैंकक
थाई राजा भूमिबल आदुल्यादेजको अन्तेष्टिमा सहभागी हुन विश्वभरका नेता थाइल्यान्ड पुगेका छन् । थाइल्यान्डमा रहेका नेपाली समुदायले समेत राजा भूमिबलप्रति बेन्कक को राज बिहारमा एक बिशेष कार्यक्रम गरी राजा भूमिबलप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् मोनास्त्श्र द्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) थाइल्यान्डको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा सम्माननीय राजगुरु ९रोयल मंक० को पनि उपस्थिति रहेको थियो । मन्दिरमा प्रार्थना पश्चात एनआरएन को टोलि त्यहाँ रहेका नेपालीले राजा भूमिबलप्रति सानाम लुआङ्ग पुगेर अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघद्वारा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा त्यहाँका चार शाही भिक्षुलाई ‘चिवर (भिक्षुको पवित्र वस्त्र)’ प्रदान गरी प्रार्थना गराइएको एनआरएनएका अन्तर्रा्ष्ट्रिय समिति कार्यकारी सदस्य खगेन्द्रराज ढकालले जानकारी दिए । गत बुधबार देखि सुरु भएको ५ दिने अन्तेष्टि आइतबार सम्पन्न भएको छ ।
मृत व्यक्तिको सम्झनामा भिक्षुलाई चिवर दान गरे स्वर्गवास हुने विश्वास रहिआएको छ । त्यहाँको किङ मोंगुट प्राविधिक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक समेत रहेका ढकालले राजा भूमिबलले न्यून आय भएको राष्ट्रलाई आफ्ना शासनकालमा अघि बढाएको भन्दै उनी विश्वकै नेताका रूपमा स्मरण गरे ।
राजा भूमिबलको पाँचदिने अन्त्येष्टि कार्यक्रम आइतबार सकिँदै छ । १३ अक्टोबर २०१६ मा ८८ वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको थियो । उनको पार्थिव शरीरलाई एक वर्षसम्म ग्रान्ड पलेसमा राखिएको थियो । पार्थिव शरीर त्यही“को बगैंचामा बौद्ध परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गरिन लागिएको हो ।
१९ मिलियन मानिसहरुले राजाको नाम मा फुल चढाएको थाई मेडिया ले जनाएका छन् । एस्तो लाखौ सहभागी भएको श्रद्धाञ्जली सभामा एनआरएनए थाइल्यान्डको लागि छुटै कार्यक्रम को अवसर प्रदान गरेकोमा राज बिहार र थाई अधिकारी हरु प्रति कृतज्ञता ब्यक्त गर्छन एन आर एन ए का अध्यक्ष आसाजिता अवाले ।
एक वर्षसम्म विश्वका नेता थाइल्यान्डमा पुगेर पार्थिव शरीरमा माल्र्यापण गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि गत वैशाखमा बैंकक पुगेर माल्यार्पण गरेकी थिइन् ।
उनको अन्त्येष्टिमा नेपालका तर्फबाट रक्षामन्त्री भीभसेनदास प्रधान बैंककमा सहभागी भएका थिए । अन्त्येष्टिमा थाल्यान्डका लाखौं सर्वसाधारण तथा ९४ देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधि सहभागी भए ।
ब्रिटेनका राजकुमार एन्ड्र्यु, जापानका राजकुमार अकिसिनोसहित नेदरल्यान्ड, बेल्जियम, स्पेन, स्विडेनका शाही परिवारका सदस्य र अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स माटिससमेत सहभागी भएका छन् ।
पछिल्लाे - केपी ओलीलाई देउवाले दिए अनौठो जवाफ, सामाजिक सञ्जालमा भयो भाइरल
अघिल्लाे - कस्तो निष्ठुरी दैव ! कलिलै उमेरमा दिपेनलार्इ सदाको लागि चुँडी लग्यो
डिभीको नतिजा आयो, कसरी हेर्ने ?
नेपाल कला सप्ताहमा भाग लिन ९ कलाकार ढाका प्रस्थान
ओमनमा नेपाली युवतीमाथि बलात्कार प्रकरण : ५ ब‌ंगाली पक्राउ
राम्रो काम गरेर फर्किएका तीन हजार नेपालीलाई पुनः कोरिया लगिने
तीन हजारलाई पुनः कोरिया लगिने
संसदमा राष्ट्रिय दलको संख्या घट्यो, अब चार दल मात्र
ठुला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादीबीच एकतापछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलको संख्या अझै घटेको छ । विगतमा संविधानसभामा ३१...
सबैभन्दा धनी मन्त्री रघुबीर महासेठकाे सम्पत्ति कति ? (विवरण सहित)
सरकारले मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । विवरणअनुसार सबैभन्दा धनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबीर महासेठ देखिएका छन्...